Maitiro ekuwana akawanda ekuratidzira mafoto neiyo iPhone | IPhone nhau
Maitiro ekuwana akareba ekuratidzira mafoto neiyo iPhone
Ruben gallardo | | Zvidzidzo uye zvinyorwa
Kuti iyo kamera yenharembozha dzave mhinduro dzinoshandiswa zvakanyanya nevashandisi kutora mifananidzo chero kupi ichokwadi. Uye zvakare, nekuda kweichi chikumbiro, kugona kwemifananidzo kwefoni mbozha kwaenda mu crescendo. Kunyangwe pamwe, ichi chikamu kunyanya kuzivikanwa kwave kuwanikwa mukumusoro kwekupedzisira kwetemu.
Iyo iPhone ndeimwe yemakomputa ayo anopa mikana yakawanda kwazvo pakutora mifananidzo. Uye zvimwe kana tine iPhone 6S zvichienda mberi. Sei? Zvakanaka, nekuti nemuenzaniso uyu takaunzwa nenzira nyowani yekutora mifananidzo ine hupenyu, inozivikanwawo se "Rarama Mapikicha". Kunyange zvakadaro, Nekusvika kweIOS 11 pamusika, izvi zvakatorwa zvakatora mukurumbira uye mhedzisiro mitsva inogona kuwedzerwa. Uye chimwe chazvo ndicho chinoreva kuburitswa kwenguva refu. Kubva ikozvino zvichienda mberi kutora mapfekero nehurefu hwekuratidzira mhedzisiro zvichakwanisika. Ngatione maitirwo azvo.
1 Ndeapi marefu ekuratidzira mafoto
2 Chinhu chekutanga: ita iyo Live Mifananidzo sarudzo yakaitwa
3 Chinhu chechipiri: tsvaga iwo mufananidzo muMifananidzo
4 Yetatu uye yekupedzisira: tamba mufananidzo uye shandisa yakareba yekuratidzira firita
Ndeapi marefu ekuratidzira mafoto
Chinhu chekutanga chatinofanira kukuudza ndechekuti maitiro aya akaoma kuita. Mukuwedzera, kurova pfuti kunewo chinhu chayo. Vashandisi vepamberi mukutora mifananidzo vachanyatso kuziva zvatiri kutaura nezvazvo. Asi kuti uite chidimbu chidiki, iwe unozoziva kuti mapikicha kamera anotora mifananidzo nekuda kwezvikamu zvakasiyana zvehunhu hwavo Asi chaizvo iyi nzira ndeyekuti uwane izvozvo shutter yekamera inovhara zvishoma nezvishoma patinodzvanya bhatani re shutter. Izvi zvichaita zvese zvinoitika - zvinogara zvichifamba - zvinotorwa mumufananidzo mumwe chete. Nekudaro iyi mhedzisiro inoshamisa.
Chinhu chekutanga: ita iyo Live Mifananidzo sarudzo yakaitwa
Kuti uwane iyi yakareba yekuratidzira mhedzisiro pane iyo iPhone, chinhu chekutanga chatinofanira kuve nacho ndeye Live Mifananidzo sarudzo inoshanda; zvikasadaro hazvigoneke kupa simba kupfura. Uchaona izvozvo pamusoro pe App mifananidzo dzakasiyana dzinoonekwa pasi pe "Kamera" pane iyo iPhone "Zvishanu to be exact."
Pakati chaipo pekumusoro iwe uchaona icon ine madenderedzwa akasiyana. Izvi zvichave zviri zveyero zvine flash chiratidzo pasi. Ichi chichaita zvicharatidza kuti Live Photo mode iripo. Iye zvino iwe unofanirwa kungo tarisa uye rova ​​iyo inotora mufananidzo. Iye anofunga kuti panofanira kuve nekufamba mukubata ikoko kuitira kuti gare gare isu tive nemhedzisiro yakatorwa mumufananidzo; Mune mamwe mazwi, kana iwe ukatora pikicha nzvimbo ine ese emhando yezvinhu, iyo iPhone haikwanise kukwanisa kuwana refu yekuratidzira mhedzisiro mupfuti iyi.
Zvino, kana tikatora pikicha inonongedzera kumugwagwa une traffic yakawanda - husiku ichave inoshamisa -, isu tinogona kuwana yakareba yekuratidzira kutora mifananidzo nezvimwe zvinoshamisa zviitiko. Ndokusaka hwaro iko iko kuita kweiyo iPhone kwakavakirwa kunofanirwa kuve kwakanaka.
Chinhu chechipiri: tsvaga iwo mufananidzo muMifananidzo
Kana tangove nekutorwa kwakaitwa, ichave nguva yekuenda kune "Mifananidzo" kunyorera kweiyo iPhone. Pazasi tichava nesarudzo dzakasiyana: mifananidzo, ndangariro, zvakagovaniswa uye maalbum. Iyo inotinakidza iyi sarudzo yekupedzisira. Mukati medu tichava nemaforodha akasiyana uye rimwe rawo richadaidzwa kuti "Rarama Mapikicha".
Mukati muchabatwa-uye nevamwe vese- avo vatorwa nebasa iri rinoshanda. Ive nekuchenjerera, kana tisina kutora mamwe akawanda mafoto mushure meiyo pfuti inotifadza, zvakare iyo isu tichaiwana nekukurumidza mune sarudzo «Mifananidzo» mune yepasi menyu. Patinoivhura, tichava nemufananidzo iwoyo kutanga.
Yetatu uye yekupedzisira: tamba mufananidzo uye shandisa yakareba yekuratidzira firita
Isu tiri nhanho imwe kubva mukuzadzisa mhedzisiro yedu. Mushure mekuvhura iyo Live Photo iyo inotinakidza isu, tichaona kuti nekutsikirira zvakasimba pairi, izvo zvinhu zvemufananidzo zvinouya kuhupenyu. Paunenge uchimanikidza mufananidzo, tsvedza chigunwe chako kumusoro; menyu mutsva ichaonekwa pamberi pako. Chaizvo, ndiyo mhedzisiro iwe yaunogona kuisa kune iyo Live Photo. Uye anotevera: Rarama, Buble, Bounce uye Yakareba Kuratidzwa.
Sezvo iwe ungangove wakambofungidzira, zviri zvekupedzisira izvo zvinotifadza. Mushure mekusarudza mhedzisiro iyoyo, izvi zvichaiswa zvakananga kumufananidzo Uye, kana isu takarova zvekutanga, mhedzisiro yacho ichave yakakodzera kuve kugovaniswa neshamwari dzako uye nemhuri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuwana akareba ekuratidzira mafoto neiyo iPhone
Thanks, ndanga ndisingazive.Ndichazviedza mangwana.
Aya ndiwo mashandisiro anoita muturikiri weSiri muIOS 11
3D sensors inosvika kune zviteshi zve Android gore rinouya